‘डा.सन्दुक रुइत नेपालका सांस्कृतिक वीर’
कला/साहित्य शनिबार, असोज ११, २०७६
पुस्तक लोकार्पणका क्रममा २१ वर्षसम्म पूर्ण दृष्टिविहीन भएर डा. रुइतले गरेको शल्यक्रियाबाट दृष्टि पाएका सल्यानका शिक्षक तोपबहादुर शर्माले रुइतले नै आफूलाई नयाँ जीवन दिएको बताए । आफ्नै हातबाट यति महान् डाक्टरको जीवनी लोकार्पण गर्न पाउनु जीवनकै अहोभाग्य भएको उनले बताए ।
यसैगरी तिलगंगा अस्पतालकी सिइओ रिता गुरुङले कर्मशील एवम् प्रतिबद्ध रुइतका कारण आफू सधैं उनको काममा जोडिएको बताइन् । डा. रुइतले आफूलाई सामाजिक एवम् परोपकारी काममा लाग्न समेत प्रेरित गरेको उनले बताइन् ।
कार्यक्रममा लेखक एवं पत्रकार विजयकुमारले डा. रुइत संघर्ष, आरोहअवरोह, सफलता आदिको पर्यायका रुपमा रहेको बताए । उनले बाटो जतिसुकै अप्ठ्यारो किन नहोस्, हिँडेपछि पुगिन्छ भन्ने उदाहरण पनि रुइत भएको बताए ।
कार्यक्रममा डा. रुइतले पुस्तक आफ्नो जीवनको मात्र नभई परिवार, आफ्नो जीवनमा भएका उतारचढाव, सफलता, आरोहअवरोह एवम् तिलगंगा आँखा अस्पतालको संघर्षको कथा भएको बताए । “अङ्ग्रेजीमा लेखिएको मेरो जीवनीको नेपाली अनुवाद आएकोमा म एकदम हर्षित भएको छु । पुस्तकले कसैलाई परोपकार वा सत्कर्मको बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो भने मेरो जीवनी सार्थक भयो भन्ने म ठान्नेछु”, डा. रुइतले भने ।
प्रकाशक फाइनप्रिन्टका अजित बरालले डा. रुइतको जीवनी छाप्न पाउनु आफूहरुका लागि महाचाड जस्तै भएको बताए । डा. रुइतले आफ्नो सुकर्मबाट लाखौं मानिसको जीवनलाई नयाँ जीवन दिएको र उनको जीवनीले सबैलाई प्रेरणा दिने उनले बताए ।
फाइनप्रिन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरज भारीले भने विनयशीलता र परोकारका प्रतीक डा. रूइतको जीवनी प्रकाशन गर्न पाउनु ठूलो सौभाग्य भएको बताए । “मलाई लाग्छ, जोन उडको माइक्रोसफ्टदेखि बाहुँनडाँडासम्मले जस्तै यो पुस्तकले पनि वैभव र विलासको जीवन त्यागेर संसारलाई असल बनाउने उदात्त कर्ममा लाग्न हामीलाई प्रेरित गर्छ”, उनले भने ।
उक्त पुस्तक अस्ट्रेलियन प्रकाशन गृह एलेन एन्ड अनविनले पहिलो पटक अङ्ग्रेजीमा प्रकाशन गरेको हो ।